Boqollaal qof oo lagu dilay Nigeria - BBC News Somali
Boqollaal qof oo lagu dilay Nigeria
Image caption Dad badan oo lagu dilay weerar lagu qaaday gobolka Borno ee dalka Nigeria
Waxaan loo maleynayaa in boqollaal qof ay ku dhinteen weerar lagu qaaday waqooyi bari dalka Nigeria, kaasoo la rumeysan yahay inay ka dambeeyeen kooxda Boko Haram.
Mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka, Ahmed Zanna, ayaa BBC-da u sheegay in qiyaastii 300 oo qof ay dileen kooxda oo weerar ku qaaday magaalada Gamboru Ngala oo ku taalla mel ku dhow xuduudda dalka Cameroon.
Weerarka oo dhacay maalintii Isniinta, ayaa haweeney goob jog ahayd waxay sheegeysaa in hadda dadka ay bilaabeen inay xabaal wadareedyo ay u sameeyaan qaraabadooda ku dhimatay dhacdada.
"Qabuuraha weyn ee magaalada Gamboru Ngala waxaan ka tiriyay 165 xabaal. Qabuuro yarna waxaan ka xisaabay 145 xabaal. Waaxan hayaan tiradaas hadda.” Ayey tiri haweeneydan goobjooga ah.
Waxay intaa ku dartay, “Welina waxaan maydad ka uruurineynaa suuqa weyn ee magaalada. Dad badan ayaa albaabada isku xiray markii uu weerarka bilowday, waxaana lagu gubay dukaamada gudahooda. Halkaas Ayaan weli maydad ka uruurineynaa."
Image caption Dhismayaal ay gubeen kooxo weerar ku qaaday dad rayid ah
Weerarkan ayaa imaanayo iyadoo weli la baadi koobayo in kabadan 200 oo gabar oo kooxda Boko Xaraam ay ka afduubteen gobolka Borno bishii hore, kuwaas oo ay sheegeen inay iibin doonaan.
11 gabar oo dheraad ah ayey kooxda mintidiinta ah ka afduubeen gobolkaa Born maalintii axadda.
Xoghayihii hore ee Qaramada midoobey, Kofi Annan ayaa dhankiisa cambaareeyay afduubka gabdhahaasi.
Mar uu la hadlaayay BBB-da waxa uu sheegay in dareenka kooxdan ee ah inay iibiyaan gabdhaha inay tahay wax “aad u xun, oo laga yaqyasoodo.”